भारतको चाहना : एमाले–फोरम सरकारमा, कांग्रेस– माओवादी प्रतिपक्षमा ? – SamajKhabar.com
भारतको चाहना : एमाले–फोरम सरकारमा, कांग्रेस– माओवादी प्रतिपक्षमा ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २० माघ २०७४, शनिबार १०:२०
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्रीको २५ घण्टे नेपाल दौडाहाका औपचारिक कारणहरु सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । तर यो आकस्मिक भ्रमणको भ्रूण परिपक्व हुन अझै केही समय लाग्नेछ । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बारम्बारको आग्रहमा भारतले यसपटक नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण गराएको हो । जसको राजनीतिक उद्देश्यले नेपाली राजनीतिलाई अब केही महिना तरगिंत गराउनेछ ।
स्वराज भ्रमणका अन्य जेसुकै कारण देखाइएपनि यो मूलतः नेपाली राजनीतिको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ संग सम्बन्धित छ । नेपालमा दूतावास स्तरबाट भारतीय चलखेल हुँदा भारतविरोधी मनोविज्ञान बढेकाले विदेश मन्त्रालयले नै यसमा चासो दिएको हो । स्रोतका अनुसार स्वराजले २५ घण्टे एउटै भ्रमणबाट नेपालका मूलधारका सबै दलको चासो सम्बोधनको प्रयास गरेकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सत्तारोहणमा भारत ‘बेखुसी’ रहेको सन्देश दिन चाहदैन । सोही कारण उनलाई विशेष महत्व दिएर ओली नेतृत्वमा बन्ने भावी सरकारलाई सद्भाव रहेको प्रकट गर्न स्वराज सफल भएकी छिन् । एमालेलाई ‘साइज’मा राखे नेपालमा भारतविरोधी भावना ‘मिनिमाइज’ हुने भारतीय धारणा छ ।
भारतको दोस्रो चासो मधेशकेन्द्रीत दलहरुको भूमिकासंग जोडिएको छ । यहीकारण ओलीसंगको भेटमा स्वराजले भावी सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालको सहभागिताबारे चासो राखेकी थिइन् । फोरम अध्यक्ष यादवसंगको भेट औपचारिक मात्रै नभएर मधेश आन्दोलनदेखि संविधान संशोधनसम्मको एजेण्डाबारे भारतीय चासो ‘निरन्तर’ रहेको संकेत समेत थियो । २ नम्बर प्रदेशमा मधेशी दल नेतृत्वको सरकारमा एमालेलाई र केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा मधेशी दललाई सहभागि गराउन ‘उत्प्रेरणा’ दिनु स्वराज भ्रमणको महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । जसको पुष्टिका लागि कम्तीमा १ महिनाको राजनीतिक कोर्स पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
स्वराज भ्रमणको तेस्रो तर महत्वपूर्ण स्वार्थ ‘वाम गठबन्धन’ तोड्नु हो । भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वराजलाई २ कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यले कांग्रेसलाई असर गरेको उल्लेख गरेका थिए । एमाले माओवादी एकता रोकेर भारत कांग्रेसलाई पनि गुन तिर्न चाहन्छ । जसको प्रयास माओवादीलाई ‘राष्ट्रपति’ नदिने वा पावर सेयरिङमा एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षको हैसियतलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने ‘विवाद’ मार्फत हुनेछ । माओवादीलाई राष्ट्रप्रमुख नदिन एमालेभित्र मात्रै होइन नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायभित्रबाट पनि दवाव आउने देखिन्छ । जसको परिणाममा राष्ट्रपति एमालेले नै राख्ने, फोरमले उपराष्ट्रपति लिने र राजपालाई सभामुख वा उपसभामुख दिनेगरी राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ । यही राजनीतिक कोर्स निर्माण गर्न स्वराज भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
माओवादीप्रति भारतीय संस्थापनले राख्न चाहेको दूरीलाई आधार बनाएर कांग्रेससंगै माओवादीलाई पनि संघीय संसदमा विपक्षी बनाउने भारतीय चाहना छ । यसो गर्दा एमाले, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रीत दल सबैको चासो सम्बोधन हुने भारतीय बुझाई छ । माओवादी बिनाको एमाले सरकार सधैं तरबारको धारमा रहने र मधेश केन्द्रीत दल जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्ने भयले भावी सरकार तुलनात्मक रुपमा सन्तुलन कायम गर्न बाध्य हुने भारतीय बुझाई छ । यो कोर्स सफल भएमा वाम एकता रोकिने मात्रै होइन, २ वर्षपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना देखाएर विपक्षमा कांग्रेसलाई बलियो बनाइराख्ने प्रयास पनि सफल हुनेछ ।
२० माघ २०७४, शनिबार १०:२० मा प्रकाशित